Khilaaf soo kala dhex-galay Wasaaradda Batroolka & Guddi ka tirsan Golaha Shacabka - Awdinle Online
Waxa uu Khilaaf xooggan soo kala dhex galay guddiga kheyraadka iyo Bay’ada golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Wasaaradda Batroolka Xukuumadda Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Khilaafka labada dhinac ayaa la sheegay in uu ka dhashay xil ka qaadistii ay golaha Wasiirada xukuumadda Soomaaliya ku sameeyeen Guddoomiyahii Hay’adda Batroolka Soomaaliya.
Guddiga kheyraadka iyo Bay’ada Golaha Shacabka oo shir kuyeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kawarbixiyeen sababaha keenay kihalaafka labada dhinac, kaas oo soo shaac baxay.
Guddoomiye kuxigeenka Guddiga Kheyraadka iyo Bay’ada Golaha Shacabka ahna kusimaha guddoomiyaha Xildhibaan Cabdifitaax Maxamed Cali ayaa waxa uu sheegay in gudigooda ay kasoo horjeesteen go’aankii ay golaha Wasiirada Xilka kaga qaadeen Guddoomiyahii Hay’adda Batroolka Soomaaliya kadib kulamo ay la qaateen Wasiirka Batroolka .
Waxa uu shegay in guddoomiyaha xilka looga qaaday sabab la’aan taasna ay keentay khilaafka soo shaac baxay xilligaan.
Golaha Wasiirada Xukuumadda Soomaaliya ayaa dhawaan xilka qaadis ku sameeyay Guddoomiyahii Hay’adda Batroolka Soomaaliya waxaana arrintaasi kasoo horjeestay Guddiga Kheyraadka iyo Bay’ada Golaha Shacabka.
Previous articleCiidamo farabadan oo lagu daadiyay Magaalooyin ka tirsan Puntland
Next articleCiidamo ka tirsan kuwa Wasiir Janan oo dowladda oo isku dhiibay+ Sawirro